आफ्नो शैली प्रचण्ड र कोइरालाले पछ्याउन थालेपछि एमालेले फेर्‍यो चुनावी रणनीति – Setosurya
काठमाडौं । नेकपा एमालेले अपनाउदै आएको चुनाव प्रचार रणनीति २ नम्वर प्रदेशमा फेरेको छ । एमालेले अपनाउदै आएको प्रचार शैली नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले अपनाउन थालेपछि एमालेले आफ्नौ शैली थप आक्रामक बनाएको छ ।
पहिलो जिल्ला नेता र उम्मेद्धारको घरदैलो र साना साना कोठे कार्यक्रम, दोस्रो पार्टीका प्रभावशाली नेताहरु सहभागि चुनावी समिक्षा र तेस्रो पार्टी अध्यक्ष सहभागि विशाल सभा । एमालेले अपनाएका यी तीन चुनावी प्रचारशैली हुन् ।
एमालेबाट मुख्यमन्त्रीका लागि योगेश भट्टराई र रविन्द्र अधिकारीको चर्चा…
ओलीले देउवालाई कटाक्ष गर्दै भने – नेपाल आइडलको मञ्चमा गाउने गीत प्रधानमन्त्रीले दिल्लीमा गाए !
अनेरास्ववियू क्रान्तिकारी पूर्व जिल्ला अध्यक्ष सहित १ दर्जन बढि एमाले प्रवेश
कांग्रेसले जित्ने डरले एमालेको समर्थन मनांगेलाइ ! एमालेले आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्ता गरायो !
वाम गठबन्धन एकता संयोजन समितिको बैठक सम्पन्न, यी हुन तीन निर्णय
केसीले भने- संघीयता वा नेपालमध्ये एकमात्र रहन्छ
यी हुन् तत्कालीन नेकपा एमालेबाट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा थपिने ४० सदस्यहरु (नामसहित)
पदाधिकारी मनोनित गरेपछि पर्वत काँग्रेसमा किचलो सुरु
अटेरी कर्मचारीलाई यसरी ठेगान लगाउंदैछ ओली सरकार
पर्बतमा ७० प्रतिशत मतदान, सोमबार विहान गणना हुने
यस्तो छ एमालेको स्थायी कमिटीको निर्णय
सप्तरीका सीडीओले भने- कार्यक्रम शान्तिपूर्ण नभए बल प्रयोग हुन्छ